Ma jirtay xili uu Ajay Devgn ka awood badnaa sedexda Khans? – Filimside.net
Ma jirtay xili uu Ajay Devgn ka awood badnaa sedexda Khans?
March 15, 2019 Jabriil Abdikadir
Ajay Devgn wuxuu kala mid yahay Sedexda Khans iyo Akshay Kumar inuu awood joogto ah ku leeyahay fanka Hindiya 26-sano ee ugu dambeesay.
Balse Devgn xiligaan la joogo awooda atoorayaasha dhanka Boxoffice-ka wuxuu kaga jiraa kaalinta 9-aad (Boxoffice Power) oo ku xiran guulaha filimada.
Halka uu kaalinta 6-aad kaga jiro awooda atoorayaasha fagta hore filimka ku gadi karaan (Star Power) oo ku xiran awooda atooraha sida filimka sedexda maalmood ee ugu horeyso ku gadi karo.
Ajay Devgn waligiis calankiisa ma dhicin mana lumin awoodiisa uu filim ku gadi karo waana Superstar guushiisa joogto tahay magaciisana fanka Hindiya ku xidideestay.
Shabakada Boxoffice India ayaa la weydiiyay inay jirtay ama dhacday xili Ajay uu ka awood badnaa Sedexda Khans (SRK, Salman iyo Aamir) dhanka Boxoffice-ka.
Jawaabta BOI Ka Bixisay Arinkan: Haa bilawgii 90-maadkii Ajay Devgn wuu ka awood badnaa Sedexda Khans weliba filimadiisii Jigar, Divyashakti, Vijaypath waxa ku furmayeen si heer sare ah oo in badan ka bilaabasho wanaagsanaayeen Sedexda Khan aflaantii ay xiligaas la imaadeen inkastoo SRK markii dambe xidig weyn ku noqday filimadii Baazigar iyo Darr.
Hadalka BOI waxaan ka fahanay in Ajay Devgn uu ka awood badnaa Sedexda Khans intii u dhaxeesay 1992 ilaa 1994 waana xiligii Salman iyo Aamir awood ahaan dhulka ku jireen halka SRK isagana markaas oo shaac baxaayay.
Laakiin laga bilaabo 1995 ilaa maantadan la joogo Ajay uma suura galin inuu Sedexda Khans ka awood badnaado waayo xili walbo awoodooda sare ayay u socotay isagana marna wuu karaar qaadanayay marka wuu gaabinayay.
Laakiin waxaa inoo muhiim ah inaan BOI ka ogaanay in Devgn ay soo martay xili uu Khans-ka xitaa ka awood badnaa madaama uu fanka dar dar xoogan kusoo galay.